Best Ground mkpanaka mwekota, waya ụwa mkpara clamps - electric ike oyiyi emeputa na Factory |Doushi
Mpịakọta mkpanaka ala, eriri waya ụwa - ihe nrụnye ọkụ eletrik
waya ụwa mkpanaka clamps
DOUSHI bụ onye nrụpụta kachasị nke Pole Line Hardware na Fastener na China.
Gbado anya na:
* ngwa ngwa
* Ngwakọta ahịrị n'elu
* Ngwaike ahịrị nkesa
* Ngwa ngwa nnyefe Line
* Ngwa ADSS/OPGW/OPPC
* Ahụmịhe nrụpụta na mbupụ afọ 20+
* ISO9001, ISO 1400 na ISO 45001 asambodo
* Mmepụta na galvanizing factory
* Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ, njikwa mma siri ike
* Nkwado akwụkwọ maka nro
* OEM na ODM ọrụ
* Nlereanya efu
Q1: Ị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ ịzụ ahịa?
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.Anyị bụ ndị ọkachamara emeputa nke Pole Line Hardware na fastener
Q2: Kedu ka ị ga-esi chịkwaa àgwà gị?
Anyị nwere usoro njikwa mma siri ike site na akụrụngwa ruo na ngwaahịa emechara.Mgbe emechara, a ga-anwale ngwaahịa niile.
Q3: Ndị ọrụ gị ọ na-anabata OEM?
Ee. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa OEM, biko nye Drawing ma ọ bụ Foto ma ọ bụ Sample.
Q4: Gịnị bụ MOQ maka ngwaahịa gị?
Enweghị MOQ, anyị na-emeso ọnụọgụ ọ bụla nke iwu gị.
Q5: Enwere m ike nweta sample?
Ee, anyị nwere ike ịnye gị nlele n'efu.
Q6: Gịnị bụ okwu ịkwụ ụgwọ?
Ịkwụ ụgwọ <= 1000USD, 100% tupu oge eruo.Ịkwụ ụgwọ> = 1000USD, 30% T / T tupu oge eruo, itule tupu mbupu.
Q7: Anyị nwere ike ịga leta ụlọ ọrụ gị?
Ee, n'ezie, nabata ileta ụlọ ọrụ anyị
Nke gara aga: nje insulator poselin agba aja aja eletrọnịkị nọrọ insulator Ike Line Hardware
Osote: Hot Dip Galvanized Strain Clamp maka ahịrị ọkụ, ahịrị ọkụ eletrik ACSR dabara adaba mwekota NLL ụdị
CAPG aluminum ọla kọpa yiri uzo mwekota BI-...
ngwaike ahịrị n'elu Hot Dip Galvanized Susp...
Elu ala set Hot itinye Galvanized Grou...
Hot itinye galvanized Ground Strand mwekota Strand G...
HDG nkwusioru akwa eriri USB mwekota U bolt electr ...
Ọwa C, Ọkara Gburugburu Akụ M5/M6/M8, Pipe Mkpuchi Bolt, Mkpọgide ogwe osisi na-ekegide ihe mgbochi, Anchor Bolt M24, Ogwe ogwe aka,